I-Garoupas Inn - I-Ocean View ne-Balcony - I-Airbnb
I-Garoupas Inn - I-Ocean View ne-Balcony
Sao Roque, Azores, i-Portugal
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Duarte
Siyindlu encane engasolwandle, uhambo olufushane oluya emabhishi anesihlabathi, izindawo zokuthenga ukudla, nezindawo zokudlela kanye nemizuzu engu-30 yokuhamba ukuya edolobheni lase-Ponta Delgada. Amakamelo ahlanganisa ikhofi netiye, namanzi okwamukela kanye newayini. Jabulela imibhede emikhulu yaseMelika, i-air conditioning, i-cable tv, amachweba e- usb aseceleni kombhede, namagumbi okugezela axhunyiwe. Phumula kubhavu wamanzi ashisayo ethala elibheke olwandle. Isidlo sasekuseni esishisayo nabandayo sifakiwe. Leli kamelo line-balcony yangaphambili yasolwandle. Ake sikusize uzizwe usekhaya esiqhingini sethu esihle sase-São Miguel, Azores!
Ukubhema kungaphandle noma kuvulandi kuphela. Sinikeza amathawula asebhishi. Sicela ulethe lokhu kuma-Furnas hhayi amathawula ethu amhlophe okugeza. Amanzi amaminithi ase-Furnas okugeza avula amathawula ethu amhlophe abe nombala omnyama! Siyabonga, uDuarte noElaine
ubusuku obungu-7 e- Sao Roque
Sibheke ulwandle e-Sao Roque, idolobhana elincane lokudoba eliseduze nedolobha lase-Ponta Delgada namabhishi anesihlabathi. Ukudla nezindawo zokudlela kuqhele ngebanga elifushane. Yimizuzu engu-8 -10 yokushayela ukuya esikhumulweni sezindiza.
Siyatholakala ukuphendula imibuzo, sinikeze amabalazwe, futhi sisikisele ngohambo losuku
Inombolo yepholisi: 2243/RRAL
Hlola ezinye izinketho ezise- Sao Roque namaphethelo